Title: TRAINED TO TORTURE: Systematic war crimes by the Burma Army in Ta’ang areas of northern Shan State (March 2011 - March 2016)
Description/subject: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: "...This report provides evidence that the Burma Army is committing war crimes – in particular torture, shelling of civilian targets, and enslavement of civilians as porters and human shields -- onawidespread, systematic scale during its ongoing offensives in Ta’ang areas of northern Shan State. The fact that the crimes are being committed with complete impunity, not only by locally based battalions, but increasingly by battalions deployed under combat divisions deployed from central Burma, indicates clearly that the crimes are being authorized from the central command. TWO is gravely concerned that the Burma Army, which remains exempt from civilian oversight under the current constitution, is not only continuing its offensives in the ethnic areas in defiance of the “peace process”, but is also systematically committing war crimes against the ethnic peoples in flagrant violation of international humanitarian law. It is urgently needed for the National League for Democracy (NLD) to act to curb the military’s power, its criminal practices and impunity. Simply sharing power with the Burma Army under the current government will only maintain the military status quo, perpetuating the war and condemning the ethnic peoples to untold ongoing suffering..."
Title: Listening to Voices: Myanmar Foot Soldiers Speak - မြန်မာ့ခြေလျှင်တင်သားများ ဖွင့်ဟပြောဆိုသံများအား နားထောင်ခြင်း
Description/subject: Listening to Voices: Myanmar Foot Soldiers Speak - မြန်မာ့ခြေလျှင်တင်သားများ ဖွင့်ဟပြောဆိုသံများအား နားထောင်ခြင်း.....စာတမ်းအကျဉ်းချုပ်: "ဤပုံနှိပ်ထုတ်ေ ၀ မှုသည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ( ၆ ) ခုမှ ခြေလျင်တပ်သားများ၏ စကား သံများအား ဖွင့်လှစ်ထုတ်ဖော် ပြီး ၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် နှင့်ထိုသူတို့၏ အနာဂါတ် ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ၊ ကြောင့်ကြမှုများ နှင့်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများ အား မီးမောင်းထိုးပြသခြင်းဖြစ်သည်။ 1 ဤစီမံကိန်းသည် နားထောင်ခြင်းနည်းပညာ / ဥပဒေဿကိုအသုံးပြု၍ ၊ြ မန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) ၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) ၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း (KIO) ၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၊ ကရင်နီအ မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ( NMSP) တို့မှခြေလျင်တပ်သား ၁၀၀ တို့ဖြင့်နားထောင်ခြင်းစကားစမည် ၀ိုင်းများ စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစကား ၀ိုင်းများမှ အဓိကအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များ နှင့် အများလက်ခံေ သာ အကြောင်းအရာတို့အား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ၊ အောက်တွ င်ပါ ၀ င်မည့်အခန်းများတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခအရေးလေ့လာမှုစင်တာ ( CPCS ) သည် မြန်မာပြည် ပဋိပက္ခအတွင်းပါ ၀ င်သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ၎င်းအဖွဲ့များမှပုဂ္ဂိုလ်များအကြား မတူကွဲပြားသော စကား သံ တို့အား အသိအမှတ်ပြု လျက်ရှိပါသည်။ နားထောင်ခြင်းန ည်းပညာ သည် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏အကြံဥာဏ်များအကြား ၊ အများလက်ခံ သောအကြောင်းအရာများသာမက ၊ ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်လျက်ရှိပါသည်။ ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုကာ NSAG များမှအကြံဥာဏ်များအား စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့များအကြားရှိ အများလက်ခံေ သာအကြောင်းအရာများ နှင့် ကွဲပြားခြားနားချက်များအား မီးမောင်းထိုးပြသနိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ၊ ထိုအကြောင်းအရာများအား ဤစာအုပ်၏ေ နာက်ဆုံး အခန်း ရှိ အဖွဲ့များ ဖွင့်ဟပြော ကား ချက် အကျဉ်းချုပ် များ၌ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။..."